Nagu saabsan - Omita Lightig
Omita Lightig oo diiwaan gashan ayaa helay 20million RMB oo la helay sanadkii 2009.
Maaddaama aan nahay naqshadeeye heer sare ah, soo saare iyo dhoofiyaha qalabka nalalka qurxinta iyo nalalka Edison, badeecadeenna iyo adeeggayagu macaamiisha adduunka oo dhan ayaa oggolaaday
Waxaan leenahay laba warshadood oo ku yaal Magaalada Dongguan oo leh aqoon isweydaarsi 6000M2 ah, bakhaar 2000M2 ah iyo 400M2 Showroom. Waxaan sidoo kale haynaa koox xirfadlayaal ah oo ka socota naqshadaynta, soo saarista iyo xakamaynta QC, iyo Suuqgeynta iyo kooxda iibka.
Qalabka nalalka, waxaan diiradda saareynaa nalalka martigalinta qurxinta qurxinta, soosaarka hudheelka, makhaayada, baarka, Mall iyo dhismo kale oo heer sare ah. muraayadda muraayadda muraayadda, iftiinka suunka, nalka sagxadda, laambadda miiska iyo miisaska gidaarka ee dalabyada kala duwan ee gudaha iyo dibedda.
Nalalka nalalka, waxaan gabi ahaanba nahay hogaamiyaha soo saaraha nalalka buuxa ee nalalka Edison, noocyo cusub oo aan tiro lahayn oo cusub oo loogu talagalay dhibcaha suuqgeynta kala duwan, qiime aad u macquul ah oo ku saabsan koritaanka ganacsiga wanaagsan. . Xitaa haddii wax soo saarka nalalkayagu aad u ballaaran yahay, waxaan ilaalinaynay xakamaynta tayada adag, iyo inaan la kulanno shuruudaha macaamiisha si dabacsan.
Nalalka xarigga, waa alaab marin loo heli karo iyo khadadka wax soo saarka si loo kobciyo nalalka iibinaya. Waxaan leenahay Mashiinka wax taaj oo kale duray for PC saarka wax soo saarka. Waxaan sidoo kale leenahay xariiq xarig oo wax soo saar oo warshaddeena leh.
Alaabtayada iyo adeeggayagu waxay ku sii fidayeen in ka badan 27 dal, Europea iyo USA oo ah Suuqa Weyn, hase yeeshe waxaan sidoo kale ganacsi ku leenahay waddammada xawaaraha sare ku jira ee ay ka mid yihiin Brazil, Chile iyo Koonfur Afrika, Nigeria, Malaysia.
Badeecadaheena intooda badani waa CE Rohs shahaadooyin, waana hubaal inay sidoo kale leeyihiin UL iyo SAA.
Dhageysiga fikrad ka duwan macaamiisha adduunka, dhalaalida qaybaha kala duwan ee warshadaha adduunka oo dhan, dhuuqaya tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee ugu dambeysay intii suurtagal ah, laakiin waligaa ha beddelin maskaxdeena koowaad -Xamaasadda waxyaabaha si wanaagsan loo qabtay iyo alaabooyinka la awoodi karo ee qaybta ballaaran ee dadweynaha.
Ku sii wad laydhka waa waxa kaliya ee aan qabano.
Muraayadda la afuufayo
Isaga Gaas Charging